Tantano ny tahiry PPA ao Ubuntu | Avy amin'ny Linux
Tantano ny tahiry PPA ao Ubuntu
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | FampiasanaLLL's UseLinux, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
¿nahoana hametraka Tahiry PPA raha efa manana programa an'arivony mampiasa ny toeram-pivarotana ofisialy Ubuntu isika?
Ny rakitra fonosana manokana (Personal Package Archive, amin'ny teny anglisy), avelao ny mpamorona hizara lozisialy sy fanavaozana mivantana ho an'ireo mpampiasa Ubuntu nefa tsy mila miandry ny tahiry fanavaozan'i Ubuntu azy vao hanavao.
Ny Launchpad, ilay tranonkala mampiantrano ny ankamaroan'ny PPA misy, dia manangana ny binary ary mitahiry azy ireo amin'ny fitoeram-bokatra manokana. Midika izany fa ny mpampiasa Ubuntu dia afaka mametraka ireto fonosana ireto amin'ny fomba mitovy amin'ny fampiasan'izy ireo ny fametrahana ny sisa amin'ireo rindranasa ao amin'ny Ubuntu, miaraka amin'ny tombony fanampiny fa hanana ny fanavaozana farany an'ireo programa ireo izy ireo ary afaka mahita programa tsy misy aza. ao amin'ny trano fivarotana ofisialy.
1 Ahoana ny fomba hametrahana tahiry PPA
2 Ahoana ny fanesorana ireo tahiry PPA
3 Ahoana ny fomba fanesorana PPA sy ny fonosany tsirairay avy
4 Ahoana ny fomba hanajanonana ireo tahiry PPA
Ahoana ny fomba hametrahana tahiry PPA
Andao haka ohatra azo ampiharina. Eritrereto hoe te hametraka Shutter isika. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia ny anarana manondro ny PPA izay tianay hapetraka. Ao amin'ny pejy Shutter PPA dia mazava fa raha manampy an'ity tahiry ity dia ilaina ny manamarika ny tsipika ppa: rakotra / ppa.
Safidy 1: avy amin'ny tsipika baiko
Ny hany mila atao dia ny manokatra terminal ary mampiditra ny baiko mety hanampiana ny PPA, hanavao ny lisitry ny fonosana ary hametraka ny programa tadiavina (Tapaho ny ohatra asanay).
sudo add-apt-repository ppa: shutter / ppa sudo apt-get fanavaozana sudo apt-get install shutter
Option 2: avy amin'ny Software Center
1.- Sokafy ny ivon-toerana Software Ubuntu.
2.- Ovay > Ny niandohan'ny lozisialy
3.- Avy eo ao amin'ny kiheba Rindrambaiko hafa, kitiho hametraka ary ampidiro ny tsipika PPA. Ao amin'ny ohatra asehontsika: ppa: rakotra / ppa ary tsindrio eo manaiky.
4. Ampidiro ny programa tadiavina (tohizana amin'ny ohatra hoe Shutter).
Ahoana ny fanesorana ireo tahiry PPA
Safidy 1: esory ny PPA amin'ny tsipika baiko
Manaraka ny ohatra hoe Shutter:
Mazava ho azy fa ny tsipika ppa: shutter / ppa dia tsy maintsy soloina izay mifanaraka amin'ny tranga tsirairay.
3.- Avy eo ao amin'ny kiheba Rindrambaiko hafa, kitiho esory ary tsindrio eo manaiky.
Tandremo: ity dia hanala ny PPA amin'ny lisitry ny fonosana fa ny fonosana napetraka amin'ny alàlan'ny PPA dia tsy hoesorina, asa iray izay tsy maintsy atao tanana. Mba hamerenana ity dingana ity, izay mety ho sarotra amin'ny sasany, dia misy fitaovana toa ny PPA Purge na Mpitantana Y-PPA.
Ahoana ny fomba fanesorana PPA sy ny fonosany tsirairay avy
PPA-Purge dia script tsotra izay hanala ny PPA resahina ary koa ireo fonosana napetraka ao aminy.
1.- Mametraka PPA-Purge
2.- Mampiasà PPA-Purge hamongorana ny PPA. Manaraka ny ohatra navelantsika:
Safidy 2: mampiasa YPPA
1.- Ampidiro ny Y-PPA:
2.- Esory ny PPA resahina. Ny interface Y-PPA Manager sary dia manam-pahaizana ampy hahitana izay hatao.
Ahoana ny fomba hanajanonana ireo tahiry PPA
Ny fanafoanana PPA dia midika fa tsy hahazo fanavaozana avy amin'izany PPA izany ny rafitra, fa ny fonosana napetraka teo aloha dia tsy hesorina. Ny tombony amin'ny fanafoanana PPA fa tsy ny fanesorana azy dia satria mora kokoa ny mamela azy io indray.
Mba hamonoana PPA:
3.- Avy eo ao amin'ny kiheba Rindrambaiko hafa, esory ny boaty eo akaikin'ny PPA resahina ary kitiho manaiky.
Zava-dehibe ny famonoana ny tsipika roa an'ny PPA tsirairay.
Toy izany koa, PPA dia azo alefa indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Tantano ny tahiry PPA ao Ubuntu
Lahatsoratra tena tsara (toy ny mahazatra) 😀
Fahafinaretana mamaky anao Pablo ^^
Misaotra Saito! Manina anao aho tany! Mahafinaritra ny mahita anao eto ...
Mazava be! Misaotra anao.
Julián dia hoy izy:
ANDRIAKAKY Ô!! Misaotra betsaka.
Hevitra kely hamitana ity torolàlana mahafinaritra ity: efa nieritreritra anao ve ny hampiditra programa izay tafiditra ao amin'ny fizarana azy manokana na hoe manana ny kinova efa lany andro fotsiny ny tahiry ofisialy na efa nametraka azy ireo ianao?
Ohatra, nametraka ny programa torrent Azureus aka Vuze avy amin'ny tahiry ofisialy aho, ary rehefa avy nampiasa azy io nandritra ny volana vitsivitsy ary manana fisie sy renirano marobe dia niatrika ny olana izay tsy azoko esorina ary ho very daholo ireo asa ireo ary fitaovana iray ihany no ilaina ao amin'ny kinova farany izay tsy novaavin'ny repository ofisialy ubunto.
Mieritreritra aho fa mieritreritra fotsiny fa nahavita nanao an'io fa tena odyssey io ary tsy nianarako na azoko akory ny fomba nanaovako azy
Salama gambi! raha ny tena izy ... ny fomba fiasa amin'izany dia mitovy. Mametraka ny PPA ianao, manavao ny lisitry ny fonosana ary rehefa manavao ianao dia hilaza aminao fa misy kinova vaovao amin'ilay programa (raha ny anao azureus) izay tsy iza fa ny misy ao amin'ny ppa.
Manantena aho fa nazava tsara.
Zytum dia hoy izy:
Tsara, saingy indraindray ny ppa manokana ho an'ny fizarana dia ampidirina.
Manana ny olana aho ohatra ny fanavaozana ny Turpial 3.0. iza no nampiditra azy tao http://ppa.launchpad.net/effie-jayx/turpial/ubuntu/dists/saucy/
raha ny ivon-toerako rindrambaiko kosa dia mifantoka amin'ireo mpiasan'i Olivia na "misavoana" (mampiasa Linux Mint aho)
Raha mbola manondro aho fa ny rakitra dia nampiantranoina tamin'ny saucy, dia tsy misintona sy mametraka ny programa aho.
Mamaly an'i Zytum
lozanotux dia hoy izy:
Tsy azo atao ny manazava tsara kokoa! ... Androany aho dia hanandrana mampakatra ny YPPA Manager voadika amin'ny teny Espaniola amin'ny 1 IHANY IHANY 🙂 apetraho ny zavatra DEB ary dia izay, tsy misy dikany ... tokony ho an'ny olona izay tsy hainao ny mampiditra PPA ary hametraka azy dia mila manampy PPA ianao lol. Lahatsoratra tena tsara, hahavita be izany. Mihobia!
Mamaly an'i lozanotux
ErKiyo dia hoy izy:
Tiavo ity bilaogy ity, Pablo! Tsara endrika sy atiny azo ampiharina. Ny fanontaniako dia mifantoka amin'ny Elementary OS ary mifandraika indrindra amin'ny "Y PPA" sy ny ivon'ny rindrambaiko; Azo atao ve ny mametraka ilay voalohany tsy hiasa? Miezaka ny manomboka azy aho ary nopi,
Mamaly an'i ErKiyo
tsia, tsy mino izany aho…
Tsy fantatra izay mety ho izy, fa tsy mino aho fa ny ivon-rindrambaiko no nahatonga ny lesoka.
Carlos Cifuentes placeholder sary dia hoy izy:
Pejy tena tsara, izany ary spaonjy aho, Ramatoa, saingy mbola mandray ny zavatra ampianarinao ho fanampin'ireo izay mialoha na maneho hevitra.
Valiny tamin'i Carlos Cifuentes
Misaotra betsaka anao Carlos tamin'ny hevitrao, mbola tsy tara loatra vao mianatra.
danny672007 dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao tamin'ny fandraisanao anjara, vaovao amin'ny Linux aho ary nanampy ahy hahafantatra bebe kokoa an'ity tontolo mahafinaritra ity ianao!
Mamaly an'i danny672007
Chakra Linux repository eo an-toerana (Azo ampiharina amin'ny distros izay mampiasa pacman)
Fanangonana vaovao an'ny Stickers del Chavo ho an'ny LINE